ဘာစီလိုနာကနေ ထွက်ခွာဖို့ အတည်ပြုလိုက်ပြီ ဖြစ်တဲ့ ဒန်နီရယ် အယ်ဗက်စ်….. - YTV Channel
Home | Sports | ဘာစီလိုနာကနေ ထွက်ခွာဖို့ အတည်ပြုလိုက်ပြီ ဖြစ်တဲ့ ဒန်နီရယ် အယ်ဗက်စ်…..
ဘာစီလိုနာကနေ ထွက်ခွာဖို့ အတည်ပြုလိုက်ပြီ ဖြစ်တဲ့ ဒန်နီရယ် အယ်ဗက်စ်…..
နေ့စဉ်အားကစာသတင်းကိုစောင့်မျှော်အားပေးနေတဲ့ ပရိသတ်ကြီးတို့ရေ…ဘာစီလိုနာရဲ့ ဝါရင့်နောက်ခံလူ ဒန်နီရယ် အယ်ဗက်စ် အနေနဲ့ ကတော့ အသက်အရွယ်အပိုင်းအခြားအရ ကြီးရင့်ပြီမို့ ဘာစီလိုနာကနေထွက်ခွာဖို့ ဆုံးဖြတ်လိုက်ပြီပဲဖြစ်ပါတယ်… အီတလီ စီးရီးအေ ၊ပြင်သစ် လိဂ်ဝမ်း နှင့် စပိန်မြေမှာ ကျင်လည်ခဲ့တဲ့ ကစားသမားကြီး အယ်ဗက်စ်ဟာ တစ်ချိန်က ညာတောင်ပံ ခံစစ်မှာ အကောင်းမွန်ဆုံး ခြေစွမ်းနဲ့ တောက်ပခဲ့သူဖြစ်ပြီး ဘာကာမှာ အကောင်းဆုံး တောင်ပံထိုးဖောက်မှုတွေကို ပါးပါးနပ်နပ်နဲ့ ဖြတ်တောက်ပိတ်ဆို့ ကစားနိုင်တဲ့ ကစားသမားအဖြစ် နာမည်ကြီးခဲ့ပါတယ်….
ဘာကာမှာ ၂၀၁၆-၂၀၁၇ တစ်နှစ်တာကစား ထားပြီး ဆီးဗီးလားမှာလည်း ၂၀၀၈ ခုနှစ်ကနေ ဘာကာကိုမပြောင်းခင်အထိ နာမည်ကောင်းနဲ့ ကျော်ကြားတဲ့ နောက်တန်းကစားသမားတစ်ဦးလည်း ဖြစ်ပါတယ်…ထိုချိန်က မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်မှ ပက်ထရစ် အီဗရာ တို့နည်းတူ အပြိုင်အဆိုင်တောက်ပခဲ့တဲ့ကြယ်ပွင့် ကစားသမားတစ်ဦးပဲဖြစ်ပါတယ်….. စပိန်မြေ ဘာကာကနေ အီတလီ ဂျူဗင်တပ်ကိုပြောင်းရွှေ့သွားချိန်မှာတော့ အလွတ်ပြောင်းရွှေ့ကြေးနဲ့သာ ပြောင်းရွှေ့ကစားခဲ့ရပြီး ထင်သလောက်ခြေ မပေါ်ခဲ့ပဲ ဂျူဗင်တပ်မှတစ်ဆင့် ပြင်သစ်မြေရှိ ပီအက်စ်ဂျီ အသင်းဆီကိုလည်း သွားရောက်ကစားခဲ့သေးပြီး နောက်ဆုံး ဘာကာကို ယမန်နှစ် ၂၀၂၁ ကမှ ပြန်လည်ရောက်ရှိလာပြီး အသက်အရွယ်အပိုင်းအခြားအရ ၁၄ ပွဲသာ ကန်ခွင့်ရခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့ ယခုအခါမှာ ဘာကာမြေကမ့်နူးကို ထပ်မံစွန့်ခွာသွားတော့မှာလည်း ဖြစ်ပါတယ်….
ဘာကာမှာ ပူယိုးလ်၊ပီကေးလ်၊အပီလီကွီတာ၊အယ်ဗက်စ်တို့ ရှိစဉ် နောက်တန်းဟာ ပြိုင်ဘက်အသင်းကို အိမ်မက်ဆိုးတွေအဖြစ် ပြောင်းလဲပေးနိုင်တဲ့ နောက်တန်းတွဲလုံးတွေဆိုရင်လည်း မှားမယ်မထင်ပါဘူး……ဘောလုံးအားကစား ချစ်ပရိတ်သတ်တို့အနေနဲ့ရော ဘယ်လိုထင်မြင်မိလဲဆိုတာလေးတွေကို ပြောပြပေးခဲ့ပါဦးနော်….